Maxaa Sababa Jilbo Xanuunka Sidee Se Loo Daaweeyaa? - Daryeel Magazine
Maxaa Sababa Jilbo Xanuunka Sidee Se Loo Daaweeyaa?
Jilbo xanuunku waa xaalad guud oo saamaysa ama saamayn karta da’ walba. Xanuunkan ayaa noqon kara mid taabanaya qayb kamid ah jilibka ama waxuu noqon karaa mid wada saameeya qaybaha oo ku koobanyahay jilibku (seedaha, murqaha, dheecaanka, carjawda, lafaha iyo dheecaankaba). Jilba xanuunku waxuu caan ku yahay dhaqdhaqaa kalagowska oo yaraada taasoo keenta inuu gabi ahaanba xadidmo dhadhaqaaqa jilibku. Waxuu noqon karaa mid khatar ah oo u baahan daawayn ama qaliin ama mid sahlan oo qofku uu isagu la tacaali karo.
Maxaa sababa jilba xanuunka
Low-ya xanuunka waxaa sababa qodobo badan kuwaasoo isagu jira dhaawac soo gaara lowga iyo xaalado caafimaadba. Dhaawac soo gaara qaybaha kala duwan ee uu ka koobanyahay low-gu ayaa noqon kara kuwo sahlan ama kuwo khatar ah, dhaawaca seedaha, murqaha, carjawda soo gaara ayaa keeni kara xanuun laga dareemo lowga, xaaladaha caafimaad ee la xariira jilba xanuunka waxaa kamid ah, infekshanka, caabuqa iyo xanuunka loo yaqaano gout (xanuun saameeya kalagowsyada yaryar sida kan hoose ee suulka cagta cad kaasoo caan ku ah caabuq). Waxaa kale oo lala xiriirayaa sababaha uu xanuukani ku yimaado in cayilka saaidka ah uu ka qayb qaadan karo, cayaaraha ayaa ugu badan meelaha uu ka yimaado dhaawaca soo gaara lawga.
Astaamaha xanuunka low-gu waxay ku xiranyihiin hadba meesha uu ka imaanayo xanuunka iyo sida uu yahay (xanuun saaid ah ama mid sahlan). Inta badan astaamaha la arko waxaa kamid ah, barar iyo adkaansho dhamaan low-ga ah, midabka low-ga oo u muuqda mid cas (gaduudan) markii la taabtana diiran ah, dhaqdhaqaaq yari ama xadidnaan kalagowska lowga, qofka oo aan socon karin ama u baahan meel uu cuskado ama qof garab gala iyo low-ga oo aan si buuxda loo fidin karin. Hadii uu jabitaan keenayo low xanuunka waxaa la arki karaa caabuq ama in lafaha kalagowsku ay ka durgaan meeshay horey ugu qaabaysnaayeen.
Hadii aan la daweyn xanuunka, waxaa dhacda inay leeyihiin awooda hogaamineed si ay u abuuraan xanuuno kale sida kan loo yaqaano osteoarthritis. Waxaana wanaagsan in la daweeyo haba yaraado xanuunkuye, sababtoo ah waxuu sahlayaa in mustaqbalka uu soo noqnoqon kara ama sababi karo xanuuno kale oo aan markaas laga walwalayn.
Sidee loo daaweeyaa
Daaweynta jilba xanuunku waxay ku xirantahay hadba waxa keenay ama sababta abuurtay xanuunkaan, tusaale hadii uu xanuunkani ku yimid infekshan, caabuq, tuf ama gout waxaa lagu dabiibaa qaab daawo ahaan? waana mid intaba badan lagu guuleysto. Hadii dhaawaca soo gaaray jilibka uu yahay midaan waxba looga qabin karin daawo ahaan waxaa la doorbidaa qaliin. Law-ya xanuunka ku yimaada sport-ga inta badan waxaa lagu xaliyaa qaab uu qofku si iskiisa isku daaweeyo( selfcare) sida in la xirto laastiig iwm.
dhaawaca soo gaara low-gu waxuu abuuri karaa caabuq saamayn ku yeesha dhamaan qaybaha kala duwan ee ruuga, waxaana wanaagsan in la booqdo isbitaal hadii uu xanuunku soo noqnoqdo.
Sidee Caruurta Loo Jeclaysiin Karaa Wax Akhriska? Sidee Caado Loo Dhigtaa Wax Akhrinta? Sidee Se La isku Jeclaysiin Karaa? 5-ta Salaadood oo si Sax ah loo Tukadaa Waxay Daaweysaa Dhabar Xanuunka Sidee Loo Hagaajin Karaa Qoyska?